Nhau - Iyo Tsvagiridzo Uye Iko Kushandiswa kweOxygen Mukurapa Kuchengetwa
Iyo Yekutsvagisa Uye iko Kushanda kweOxygen Mukurapa Kuchengetwa
Oxygen chimwe chezvinhu zvemweya. Haina kuchena, haina hwema uye haina kunaka. Oxygen inorema kupfuura mweya. Iine huwandu hwe1.429g / L pasi pemamiriro ezvinhu akajairika (0 ° C uye kumanikidza kwemhepo 101325 Pa), uye yakanyungudika mumvura. Zvisinei, iyo solubility yakanyanya kuderera. Kana iko kumanikidza kuri 101kPa, iyo oxygen inova yakajeka bhuruu mvura pane ingangoita -180 ℃, uye chando chakaita sechando-chakajeka bhuruu yakasimba pane ingangoita -218 ℃.
Oxygen inoshandiswa mune metallurgia indasitiri, indasitiri yemakemikari, kurapwa kwetsvina, hutano, rutsigiro rwehupenyu, zvemauto uye muchadenga, nezvimwe.
Iko kuisirwa kweoksijeni mune zvekurapa uye zvehutano ndekwe: kupa kufema-kunoshandiswa munzvimbo dzine hypoxic, hypoxic kana anaerobic, senge: mashandiro ekudhiraivha, kukwira makomo, kukwira kwakakwirira, nzvimbo yekufambisa, kununura kwekurapa, nezvimwe.
Panguva imwecheteyo, mweya wekufema weokisijeni unowanzo shandiswa seimwe yematanho ekutanga erubatsiro uye inodikanwa kumatimu ekununura uye mumaamburenzi.
Mukurapa uye kuchengetedza kwehupenyu, mashandiro eoksijeni ndeyekuchengetedza kumanikidzwa kwemweya weoksijeni muropa reropa padyo padanho reyakajairika, rinova 13.3kPa (100mmHg).
Nekuenderera mberi kwekuvandudza uye kugadzirisa kwe diki okisijeni concentrator, imba yekurapa oxygen yakasimbiswa mumakiriniki ekurapa. Inonyanya kukodzera kuvarwere vakwegura. Zvirwere zvinorapwa zvinosanganisira emphysema, chisingaperi bronchitis, bronchial asthma, sequelae yetibhii, kupindirana kwemabayo, bronchiectasis, gomarara remapapu, nezvimwe.
Oxygen yekushandisa michina ndeimwe yeakanyanya kutsvagisa nzira dzeAngelBiss timu. Isu takagona yakakwana okisijeni concentrator yekugadzira tekinoroji uye yakanakisa mushure-yekutengesa sevhisi. Uye AngelBiss kambani ndiyo yekutanga pasirese kutarisisa kuchinjika kweokisijeni concentrator pamwe neyekutanga inogona kudzora mwero wekuchinja mukati me0.1% kusvika parizvino (iyo kusvika parizvino iyo nhanho mune mamwe maindasitiri avhareji nhanho iri pamusoro pe0.6%) . Ngirozi mwero okisijeni concentrator inogoverana maawa makumi maviri nemana pazuva, mazuva manomwe pasvondo, uye pamusoro pehoriyamu maawa 18000 kuvimbiswa kwe oxygen oxygen.